गृहमन्त्रीको प्रश्न : प्रहरी चलाउँने अख्तियारी खै ? - www.kchhakhabar.com
गृहमन्त्रीको प्रश्न : प्रहरी चलाउँने अख्तियारी खै ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २८, २०७४ समय: १२:०६:०७
इटहरी/ एक नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश प्रहरी चलाउँने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनु पर्ने बताएका छन् । प्रहरी संगठन गृहमन्त्री,गृह सचिब र आईजीपीको निर्देशनमा चल्ने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई वेवस्ता गर्ने गरेको गुनासो गरे । प्रदेशका गृहमन्त्रीको अधिकार माथिल्लो निकायबाटै हुने गरेको भन्दै केन्द्रिय सरकारले अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने माग गरे ।
सुनसरीको इटहरीमा भएको न्याय र सुरक्षा अध्यान केन्द्रले आयोजना गरेको प्रहरीको सगठनात्मक गोष्ठिमा बोल्दै प्रदेशका गृहमन्त्री समेत रहेका कार्कीले प्रदेशको अधिकार माथि केन्द्रिय हस्तक्षेप बन्द गरीनु पर्ने वताए । संघियतामा देश गए सँगै प्रदेशका प्रहरीहरु आफ्नै नियम कानुनमा प्रदेशले चलाउँन पाउँनु पर्ने उनको भनाई थियो । प्रदेशको प्रहरी प्रदेश सरकारले नै चलाउँनु पाउँनु पर्छ उनले थपे ।
अहिले केन्द्रिय सरकारको प्रदेशमा हस्तक्षेप भईरहेको आरोप लगाउँदै कार्कीले भने सबै कुरा आफुलाई थाहा नहुने बताए । प्रहरी केन्दले चलाउँने अनि हामी के गर्ने ? उनको प्रश्न थियो । प्रदेशका जनसंख्या र आवश्यकताको आधारमा प्रदेशलाई प्रहरी दिई एआईजी देखि तलको संख्या प्रदेशलाई सबै सरुवा,वढुवा,प्रमोसन गर्ने सम्मको सहित दिने हो भने मात्र यो सरकार जनउत्तरदायी सरकार हु सक्छ उनले भने । प्रहरी गठन गर्ने अधिकार तत्काल प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने उनको माग थियो ।
मलाई गृहमन्त्री कुनै घट्ना घट्छ मेरो आदेश मान्ने खै कानुन ? कानुनी हिसवाले मेरो आदेश मान्नु पर्छ भन्ने छैन अनि कसरी हुन्छ उनको प्रश्न थियो । प्रदेशका गृहमन्त्रीले पत्रिकामा हेरेर के हुदै छ भनेर सोध्ने ? उनले प्रश्न गरे । आफ्नो प्रदेशलाई सक्षम बनाउँन आफ्नै पोषाक तथा अन्य प्रविधिमा फरक पार्ने पाउँनु पर्ने उनको भनाई थियो । यहाँको गृहमन्त्रालयले दण्ड र पुरस्कार दिन नपाउँने हो भने हामी प्रति प्रहरी कसरी जिम्मेवार हुन्छ उनले थपे ।
नेपाल प्रहरीलाई संघिय प्रहरी वनाउँने हो भने प्रहरी गठन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने वताए । हामीलाई समय लागे पनि प्रदेश प्रहरी गठन गरेर प्रदेशलाई सक्षम बनाउँन सकिने बताए । प्रदेश प्रहरी बनाई प्रदेशमा भर्ती गरी आफ्नै लोगो र आफ्नै तलब भत्ता दिन सकिने उनको तर्क थियो । केन्द्रले समन्वयका काम बाहेक सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने गृहमन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले प्रहरी प्रतिको जनविस्वास गुम्दै गएको भन्दै यसलाई कायम राख्नु पर्ने बताईन । प्रहरीले आफ्नो काम निरन्तर गरीरहे पनि जनताले हेर्ने दृष्टिकोण नकरात्मक हुदै गएको वताईन । प्रहरीले आफ्नो साख जोगाउँन आवश्यक रहेको उपसभामुख पोखरेलको भनाई थियो ।
प्रदेश संसद लिलम वस्नेतले प्रहरीमा अहिले पनि चाप्लेसी र घुस खौरी चलीरहेको वताए । प्रहरीको संख्या भन्दा पनि राम्रो प्रहरी बनाउँनु पर्ने उनको तर्क छ । पहिला थोरै प्रहरीले धेरै काम गरे पनि अहिले धेरै प्रहरीले थोरै काम समेत गदैनन् उनले भने । प्रहरीलाई राजनितिक हस्तक्षेप विना काम गर्नु दिनु पर्ने बताउँदै उनले भने प्रहरीले अहिले पनि अपराधिक क्षेत्रमा सोचेजस्तो काम नगरेको उनको गुनासो थियो । प्रहरी भित्र ब्यापक सेटिङ अहिले पनि चलीरहेको भन्दै प्रदेशमा प्रहरीको संख्या थप्ने भन्दा पनि पूर्ण अधिकार प्रहरीलाई दिएर संख्या घटाउँन राम्रो हुने संसद वस्नेतको तर्क छ ।
प्रदेश संसद सर्वध्वज सावाले प्रदेशका प्रहरीलाई सक्षम बनाउँन लागी पर्नु पर्ने सावाको भनाई थियो । अहिले प्रहरीले गदै आएको कार्य राम्रै छ अझै प्रहरी सुध्रदै जानु पर्छ उनले भने । त्यस्तै कार्यक्रममा पूर्व एआईजी गोविन्द बहादुर थापाले संघिय प्रहरीलाई ब्यावस्थीत र संक्षम बनाउँन सबैले अहम भुमिका खेल्नु पर्ने बताए ।